လမ်းတွေမှာ အရင်လို စည်ကားနေတာတွေ ကို ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့် သွေးမအေး သွားကြ ဖို့ တောင်းဆို လိုက်တဲ့ မေတိုးခိုင် – GaMone Media
Homepage / Celebrity / လမ်းတွေမှာ အရင်လို စည်ကားနေတာတွေ ကို ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့် သွေးမအေး သွားကြ ဖို့ တောင်းဆို လိုက်တဲ့ မေတိုးခိုင်
လမ်းတွေမှာ အရင်လို စည်ကားနေတာတွေ ကို ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့် သွေးမအေး သွားကြ ဖို့ တောင်းဆို လိုက်တဲ့ မေတိုးခိုင်
By Ga MonePosted on April 2, 2021
သရုပ်ဆောင် မေတိုးခိုင်ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလအစကတည်းမှ စပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် လမ်းပေါ်မထွက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်များ မှတစ်ဆင့် Speak Out လုပ်ပေးနေတာကိုလည်း မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ ဒါ့အပြင်လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရင်း မမျှော်လင့်ဘဲ ကျဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအတွက်လည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတာပါ။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ပိုက်ဆံသွားထုတ်ရင်းနဲ့ တွေ့ကြုံလာခဲ့တာတွေကို ပြန်လည်ရေးသားဝေမျှပေးထားတာပါ။
ဒါကတော့ လမ်းတွေမှာ အရင်လိုစည်ကားနေတာတွေကို ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့် သွေးမအေးသွားကြဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအတူတူ တိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့် နည်းနည်းလေးမှ အားလျော့သွားလို့ မဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း…. ” ပိုက်ဆံသွား ထုတ်တာ လမ်းမှာ ကားတ္စေစည်ကားလိုက်တာ… စားသောက်ဆိုင်တွေ လူတွေအပြည့်ဪ သူတို့စိတ်မွန်းကျပ်လို့ ဒီနေ့တစ်ရက်လေး ထွက်ရင်းတိုးတာနေမှာဆိုပြီး ပြန်ဖြေ တစ်ချို့ဆို ရယ်မော ဪ ငါသူတို့ ရယ်မိတဲ့ တစ်ခဏလေးမှာ တွေ့မိတာနေမှာပါစိတ်ပြန်ဖြေ.. တကယ်လည်းအဲ့လိုလူတွေရှိမှာပါ တကယ်အဲ့လိုဆိုကောင်းမှာပဲ.. ဒါပေမဲ့ တစ်ခါလည်းမဟုတ် 😞တစ်ခါထွက် အခေါက်တိုင်းလူတွေပိုများတယ်… နေသားကျသွားကျပြီလား?
မနာကျည်းကြတော့ဘူးလား…. ကျဆုံးသွားသူ တွေ အဖမ်းခံရသူတွေ မိသားစု တွေက ဒီလို အုပ်စုလိုက် ပျော်ပါးနေကြတာ မြင်ရင်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုခံစားရမလည်း? 😞 စဉ်းစားကြပါအုန်း… တကယ်ခံစားရလွန်းလို့ပါ😭 သွေးမအေးကြပါနဲ့နော် တောင်းပန်ပါတယ်။ မပြီးဆုံးသေးဘူး ဒါကြီးက မပေါ့ကြပါနဲ့ အပြင်မှာ အသက်တွေရင်းပြီး တိုက်ပေးနေကြတဲ့သူတွေကိုအားနာပါအုန်း။ အသက်ပေးသွားကြတဲ့သူတွေကို အားနာပါအုန်း။ နှိပ်စက်ခံ ဖမ်းစီး ခံထား ရတဲ့သူတွေကို အားနာပါအုန်း… ဒါအားလုံးတူတူတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲ နည်းနည်းလေးတောင် အားလျော့လို့မရဘူး။ အားတင်းထားကြပါအုန်း 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 PS : ဖူးကအမြဲအားလျှော့စေမယ်စကားတွေ စာတွေ တတ်နိုင် သလောက်ရှောင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒါလေးတော့တစ်ချို့ကိုမြင်စေချင်လို့ပါ။ ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်းသိရှိနိုင်စေရန် တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမတိုးခိုင္ကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလအစကတည္းမွ စၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ လမ္းေပၚမထြက္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္မ်ား မွတစ္ဆင့္ Speak Out လုပ္ေပးေနတာကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ဒါ့အျပင္လူထုလႈပ္ရွားမႈမွာပါဝင္ရင္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြအတြက္လည္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနတာပါ။ မၾကာေသးခင္ နာရီပိုင္းေလာက္ကလည္း သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပိုက္ဆံသြားထုတ္ရင္းနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံလာခဲ့တာေတြကို ျပန္လည္ေရးသားေဝမွ်ေပးထားတာပါ။
ဒါကေတာ့ လမ္းေတြမွာ အရင္လိုစည္ကားေနတာေတြကို ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႕လိုက္ရတာေၾကာင့္ ေသြးမေအးသြားၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးအတူတူ တိုက္ရမယ့္တိုက္ပြဲျဖစ္တာေၾကာင့္ နည္းနည္းေလးမွ အားေလ်ာ့သြားလို႔ မျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း…. ” ပိုက္ဆံသြား ထုတ္တာ လမ္းမွာ ကားေတၥစည္ကားလိုက္တာ… စားေသာက္ဆိုင္ေတြ လူေတြအျပည့္ဪ သူတို႔စိတ္မြန္းက်ပ္လို႔ ဒီေန႔တစ္ရက္ေလး ထြက္ရင္းတိုးတာေနမွာဆိုၿပီး ျပန္ေျဖ တစ္ခ်ိဳ႕ဆို ရယ္ေမာ ဪ ငါသူတို႔ ရယ္မိတဲ့ တစ္ခဏေလးမွာ ေတြ႕မိတာေနမွာပါစိတ္ျပန္ေျဖ.. တကယ္လည္းအဲ့လိုလူေတြရွိမွာပါ တကယ္အဲ့လိုဆိုေကာင္းမွာပဲ.. ဒါေပမဲ့ တစ္ခါလည္းမဟုတ္ 😞တစ္ခါထြက္ အေခါက္တိုင္းလူေတြပိုမ်ားတယ္… ေနသားက်သြားက်ၿပီလား?
မနာက်ည္းၾကေတာ့ဘူးလား…. က်ဆုံးသြားသူ ေတြ အဖမ္းခံရသူေတြ မိသားစု ေတြက ဒီလို အုပ္စုလိုက္ ေပ်ာ္ပါးေနၾကတာ ျမင္ရင္စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုခံစားရမလည္း? 😞 စဥ္းစားၾကပါအုန္း… တကယ္ခံစားရလြန္းလို႔ပါ😭 ေသြးမေအးၾကပါနဲ႔ေနာ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ မၿပီးဆုံးေသးဘူး ဒါႀကီးက မေပါ့ၾကပါနဲ႔ အျပင္မွာ အသက္ေတြရင္းၿပီး တိုက္ေပးေနၾကတဲ့သူေတြကိုအားနာပါအုန္း။ အသက္ေပးသြားၾကတဲ့သူေတြကို အားနာပါအုန္း။ ႏွိပ္စက္ခံ ဖမ္းစီး ခံထား ရတဲ့သူေတြကို အားနာပါအုန္း… ဒါအားလုံးတူတူတိုက္ရမယ့္တိုက္ပြဲ နည္းနည္းေလးေတာင္ အားေလ်ာ့လို႔မရဘူး။ အားတင္းထားၾကပါအုန္း 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 PS : ဖူးကအၿမဲအားေလွ်ာ့ေစမယ္စကားေတြ စာေတြ တတ္ႏိုင္ သေလာက္ေရွာင္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ဒါေလးေတာ့တစ္ခ်ိဳ႕ကိုျမင္ေစခ်င္လို႔ပါ။ ” ဆိုၿပီး ေရးသားထားတာပဲျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြလည္းသိရွိႏိုင္ေစရန္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ကူးယူတင္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတယ္ေနာ္။
Previous post နေရပ်စွန့်ခွာ ခဲ့ရသော စစ်ဘေးရှောင် ကရင်တိုင်း ရင်းသားတွေ အတွက် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် လှူဒါန်းရန် ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
Next post သူတောင် မလုပ်ရဲတဲ့ ကိစ္စတွေ ကို သတ္တိရှိရှိ လုပ်ဆောင် နေကြ တဲ့ မြို့နယ် တစ်ချို့က ပြည်သူတွေ အား လေးစား ဂုဏ်ယူနေတဲ့ မင်းမော်ကွန်း